FJKM Ankadindramamy Fahazavana » TORITENY 2020 – Alahadin’ny Sampandrofia 05 aprily
Toriteny Alahadin'ny Sampandrofia 2020
TORITENY 2020 – Alahadin’ny Sampandrofia 05 aprily
Natao ny 05 Avr 2020, Pasitera: RAKOTONDRASOA Harijaona
Alahady 05 Aprily 2020, Alahadin’ny Sampandrofia
Salamo 118. 24 – 29 ; Marka 11. 1 – 11 ; Apokalypsy 15. 1 – 4
Marka 11. 1 – 11
Ny loha-hevitra volana Aprily 2020 dia manao hoe : « VAVOLOMBELON’NY FITSANGANAN’NY TOMPO NY MINO ».
Ity Alahady ity dia Alahadn’ny Sampandrofia, alahadin’ny fanombohan’ny lalan’ny Hazo fijaliana. Tsaroana amin’ity andro ity ny « Niakaran’i Jesoa Kristy tao Jerosalema ». Nanehoana ny Maha-Mpanjaka miavaka Azy ka nahatonga ny olona hihoby hankalaza Azy nefa koa io no làlana mitarika ho an’ny fisamboarana Azy sy ny fahafatesany teo amin’ny Hazo fijaliana. Tsy maty mandrakizay fa nitsangana tamin’ny maty nandresy ny fahafatesana. Ny mpino kristiana sy mandray marina izany fandresen’i Jesoa ny fahafatesana izany dia sahy mijoro ho vavolombelona fa velona ny Tompo, velona mandrakizay.
Alahady akatoky ny Paska, alahady fanombohan’ny lalan’ny Hazo fijaliana. Noraisin’ny mponin’i Jerosalema tamin’ny fomba miavaka i Jesoa, tena nasandratra ho Mpanjaka.
Fanandratana an’i Jesoa Mpanjaka
1. Efa voahomana mialoha
Hiakatra an’i Jerosalema i Jesoa. Indro Izy maniraka mpianatra hiditra ao amina vohitra iray, haka zana-boriky ampiasana amin’izao fiakarany, fidirany an’i Jerosalema izao. Raha dinihina tsara ny teny voasoratra dia azo heverina fa efa voahomana mialoha izao toe-javatra izao mba hanehoana ny maha-Mpanjaka miavaka Azy.
and.2 , « zana-boriky mifatotra, izay tsy mbola nitaingenan’olona… » : efa fomba mahazatra teo amin’ny jiosy ny manokana biby ampiasaina amin’ny lafiny ara-pivavahana na ho amin’ny zara fanompoana manokana ( Nom 19. 2 ; Deo 21. 3 ; 1 Sam 6. 7 ). Azo heverina fa mifandray ny hoe : « tsy mbola nitaingenan’olona » sy ny hoe « tsy mbola nasiana zioga » . Araka izany io « zana-boriky » io dia efa voahomana ho amin’ny fanehoana an’i Jesoa ho Mpanjaka miavaka rehefa miakatra an’i Jerosalema. Olona resy lahatra, olona mino ny fanafahana tanterahin’Andriamanitra ho an’ny olona ny tompon’ny zana-borika ka manokana izany ho amin’ny asan’Andriamanitra, fanandrantana ilay Mpanjaka miavaka.
and.3 ( and. 3 – 6 ) « … misy raharaha analan’ny Tompo azy… » valin-teny omena ireo olona manontany izany. Toa midika izany fa ny tompon’ilay zana-borika na ny olona ao amin’io tanana misy io zana-boriky mifatotra io dia efa mahalala tsara ny Tompo. Rehefa tonga tokoa ny mpianatra naka ity zana-boriky ity ka nambara io hafatry ny Tompo io, ny mahagaga tsy nisy fanadihadiana ny hoe iza ilay « Tompo ». Mazava ny voasoratra «navelan’ny olona handeha izy » Mazava araka izanyolona efa nandre ny fampianaran’i Jesoa ireo olona ireo, mahalala Azy tsara.
Ry havana malala, niara-niasa tamin’Andriamanitra ho fanehoana ny maha-Mpanjaka an’i Jesoa : ny mpianatra nirahiny, ny tompon’ny zana-boriky, ny olona tao an-tanana. Olona efa nifanerasera tamin’i Jesoa ka nanaiky ny maha-Mpanjaka Azy ka indreto nanaiky ho vavolombelon’ny fanafahana entiny ho an’izao tontolo izao. Tsarovy raha te-hijoro marina ho vavolombelon’ny fitsangan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty ianao, mety hanome ny fotoanano, ny fanananao toa izay nataon’ireo olona tamin’izany fotoana izany.
2. Mamelona ny fanantenana ho an’ny mpino
Rehefa azo ilay zana-boriky, indro i Jesoa Mpanjaka miavaka mitaingina zana-boriky. Mahagaga, mahatalonjona eto ny zava-misy. Olona kivy noho ny hetraketraky ny mpanjakantany Romana sy ireo mpomba azy no lasa naneho fihetsika tena miavaka.
and.7 – 8 , «ary maro no namelatra ny lambany teny amin’ny tany…. » : ny famelarana ny lamba amin’ny lalana dia efa nataon’ny jiosy tamin’ny fandraisana ny mpanjaka vaovao hitondra ny firenena ( 2 Mpanj 9. 13 ). Mifamatotra amin’izany koa ny fampiasana ny « rantsan-kazo » izay maneho ny fifaliana noho ny fandraisana ilay mpanjaka heverina fa hitondra fiainana vaovao.
Miseho eto araka izany fa fanandrantana, fankalazana Ilay Voahosotr’Andriamanitra ho Mpanjaka hitondra fiainam-baovao ny vahoaka miatrika izao fiakaran’i Jesoa tao Jerosalema izao. Efa tsapan’izy ireo tokoa mantsy ny maha Mesia an’i Jesoa tamin’ny fampianarany misy fahefana, i Jesoa nanafaka ireo olona tamin’ny fatoran’aretina samihafa.
Hoy ny and.9 – 10 …. , Noraisina tamin’ny fanajana tokoa ilay Mpanjaka hitondra fahafahana ho an’ny olona, Ilay Mpanjaka avy amin’ny taranak’i Davida. Feno fanantenana ny olona mandray ilay Voahosotra ka mifaly. Resy tanteraka ny fahakiviana, ny tebiteby. Fanantenam-pamonjena no nameno ny fo.
Ry havana malala, ny fiakaran’i Jesoa Kristy tao Jerosalema naneho ny maha-Mpanjaka miavaka, hitondra famonjena, hitondra fanafahana ho an’ny olona dia namelona indray ny fanantenana, nampijoro indray ny olona. Ry havako malala, amin’ny toe-javatra ianantsika ankehitriny dia maro ireo kivy, ketraka, tsy mahita vahaolana manoloana ny toe-javatra iainan’ny fiaraha-monina. Hafatra ho anao, tsarovy mbola eo i Jesoa Kristy ilay Mpanjaka tena miavaka, Mpanjaka be voninahitra kanefa nanetritena, nanaiky ho faty, nisolo voina antsika. Ao Amin’i Jesoa Kristy irery ihany ny famonjena, ny vahaolana antsika, efa nitondra ny rofy rehetra Izy, efa nanasitrana ny aretina rehetra Izy, ento eo Aminy ny fiainanao. Maro be ireo marary tonga teo Aminy sitrana, eny hatramin’ny aretina tsy nahitam-panafana aza nositraniny. Jesoa Kristy no Mpanjaka tena azo antoka mitondra ny fanantenana tsara ho anao, Matokia Azy.